Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeGuam Breaking » IGuam ngaphandle kwabakhenkethi baseKorea ngoku yimbali
Airlines • isikhululo • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeGuam Breaking • iindaba • Tourism • uthutho
Namhlanje, iGuam yamkele iindwendwe ezibuya ngenqwelomoya yaseKorea ngenqwelomoya, yokumakisha yamkele uhambo kwakhona.
The Guam Bureau yeeNdwendwe (GVB) kunye ne-AB Won Pat International Airport Authority (GIAA) bamkele inqwelomoya yokuqala eqala kwakhona ukusuka eKorea Air kusasa namhlanje.
Inqwelo moya ye-B777-300 yafika ivela e-Incheon kunye nabakhweli abangama-82.
Umoya waseKorea uqalise inkonzo yeveki kwakhona eGuam okoko kwaqala ubhubhane we-COVID-19.
“Siyavuya ukwamkela ukubuya komoya waseKorea kwaye siyababulela ngokuzinikela kwabo eGuam kwakhona. Ngelixa lo nyaka uphelileyo unesiqingatha ube ngumceli mngeni kuye wonke umntu, kulungile ukubona ukukhanya ekugqibeleni kwetonela kukhanya ngakumbi, utshilo uGqirha Gerry Perez, usekela-Mongameli we-GVB. "Sijonge ukusebenza nabaninzi beenkampani zethu zeenqwelo moya kunye namaqabane ethu kwezorhwebo ukuvuselela icandelo lezokhenketho laseGuam."
U-T'way uphinde waqalisa ngenkonzo yomoya rhoqo nge-31 kaJulayi kwaye wazisa abakhweli abangama-52 eGuam. I-Jin Air yongeze inkonzo yayo yomoya kabini ngeveki, eqala namhlanje ngo-2: 42 pm I-Jin Air kuphela kwesithuthi esisekwe eKorea esineenkonzo zomoya rhoqo kulo bhubhane.
I-GVB iyaqhubeka nokwenza imibuliso yokufika ukuze yamkele zonke iindiza eziqala kwakhona. Iinqwelomoya ezidibeneyo kulindeleke ukuba zibonelele ngezihlalo eziqikelelwa kwi-3,754 ukuya eGuam ukuphela kuka-Agasti.
Kwiintsuku ezi-4 ezidlulileyo UTway waqala inkonzo phakathi kweKorea neGuam.